Guddi ka shaqeeya la wareegidda Ammaanka Soomaaliya oo la dhisay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
18th January 2018 MAREEG Af Soomaali 0
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo kaashaneyso Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), Qaramada Midoobay, Midowga Yurub iyo bah-wadaagta caalamiga ah ee muhiimka ah ayaa aasaasay Guddiga Udub-dhexaadka u ah Xil-wareejinta, oo loo xil saaray diyaarinta qorshaha xil-wareejinta ee Soomaaliya.
Guddiga Udub-dhexaadka u ah Xil-wareejint oo uu hoggaaminayo la Taliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ayaa waajibaadkiisa shaqo waxaa ka mid ah in uu gacan ka geysto habka loo wajahayo xil-wareejinta, iyo bixinta qorshaha xil-wareejinta oo qabyo-qoraal ah meesha lagu gaaro bisha Maajo ee sanadkan.
Guddiga oo mas’uuliyaddiisa koowaad uu noqon doono in uu ka caawiyo Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha in ay horumuud ka noqdaan geeddi-socodka xil-wareejinta ayaa la rajeynayaa in uu horseedo xil-wareejin “macquul ah kuna saleysan shuruudo” iyo jadwal macquul ah, si mas’uuliyadda amniga qaranka laga wareejiyo AMISOM, laguna wareejiyo Ciidamada Ammaanka ee Soomaaliya.
“Waxaa uu ku saabsan yahay in si hufan, oo tartiib ah oo nidaamsan laga wareejiyo mas’uuliyadda amniga AMISOM laguna wareejiyo Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya,” ayuu carrabka ku adkeeyay ku Xigeenka Madaxa Howlgalka AMISOM, Simon Mulongo, oo ka hadlayay kulanka kooxda qaybta amniga ee lagu qabtay Muqdisho maalinta Isniinta kaas oo looga arrinsanayay qorshaynta xil-wareejinta.
Kulanka oo ay si wadajir ah u guddoominayeen Mudane Mulongo iyo Ra’iisal Wasaare Khaire ayaa lagu heshiiyay in Guddiga Udub-dhexaadka u ah Xil-wareejinta uu sidoo kale xaqiijin doono isku duwidda Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, Maamul Goboleedyada iyo beesha caalamka. Hannaan qorshayn ah oo ay isaga kaashanayaan Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, Maamul Goboleedyada, Maamulka Gobolka Benaadir iyo AMISOM ayaa laga soo qaadan doonaa ujeeddada, hab-dhismeedka iyo hannaanka isku duwidda ee xil-wareejinta.
“Midowga Afrika wuu soo dhaweynayaa barnaamijkan xil-wareejinta,” ayuu xusay Mudane Mulongo.
“AMISOM waxaa ay durbaba bilowday howsha iyada oo u mareyso Habka Dhammeystiran ee loo Wajahayo Amniga ee haatan socdo,” ayuu raaciyay, asaga oo carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la adeegsado “hannaan loo eegayo xaaladaha ka jira dalka”, iyada oo la tixgelinayo “xaaladaha amniga ee gobolka”.
Mulongo ayaa ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in la helo taageerro wax ku ool ah oo waarta, kuwaas oo shuruud u ah qorshe xil-wareejin ah oo guuleysta. “Waxaa aan shaki ku jirin in meelaha laga nugul yahay iyo dulduleelka lagu sheegay ORA ay u baahan tahay in AMISOM la siiyo awood ay ku qabato waajibaadkeeda si hufan,” ayuu yiri.
“Ballan-qaadyada horey loo qaaday ee ku aaddan awood-ciidan iyo qalab casri ah ma ahan kuwa aan muhiimaddooda halkan ku koobi karo. Si looga gudbo caqabadaha dhinaca howlgallada istaratiijiga ah ee ciidamada AMISOM, waxaa laga maarmaan ah in qalabkan istaratiijiga ah ee aan sheegay ay bixiyaan beesha caalamka, si loo dardargeliyo geeddi-socodka xil-wareejinta,” ayuu carrabka ku adkeeyay Mulongo.
Maadaama ay tahay shuruud hordhac u ah geeddi-socodka xil-wareejinta, AMISOM ayaa kulanka qorshaynta ka jeedisay codsi ah in lagu dhaqmo mabaaddii’da go’aamin doonta wax-qabadka xil-wareejinta, oo ay ka mid yihiin qiimeynta ciidanka, heerarka hantida iyo qalabka xoojiya awoodda ciidan ee casriga ah. Mulongo ayaa ku boorriyay in “go’aan mideysan” ay hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ay ka yeeshaan AMISOM iyo qaabka xil-wareejinta ee kaalin ku leh doorashooyinka 2021-ka, iyo sidoo kale deegaannada la xorreeyay iyo dhulalka ku jira gacanta AMISOM ama Ciidanka Xoogga Soomaaliya, iyada oo wakhtiga uu yahay mid ciriiri ah.
“AU/AMISOM waxaa ay soo dhaweyneysaa qorshaynta xil-wareejinta oo ay Soomaaliya iyo Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay si tartiib ah ula wareegi doonaan mas’uuliyadda amniga,” ayuu yiri.
“Waxaan u baahannahay wakhtiga ugu dhow oo ah mar aysan gacanteenna ka bixi doonin guulaha aan gaarnay,” ayuu ku daray asaga oo carrabka ku adkeeyay in guusha xil-wareejinta ay “ku xirnaan doonto in Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay sahasho jawi wanaagsan ee siyaasadeed” iyo “taageerro buuxda ee dhinaca saadka iyo dhaqaalaha” ee loo jiheynayo AMISOM iyo Ciidamada Ammaanka ee Soomaaliya.
Beesha caalamka ayaa soo dhaweysay geeddi-socodka qorshaha xil-wareejinta iyaga oo ballan-qaaday in ay taageerayaan AMISOM iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya si ay waajibaadkooda uga soo baxaan. Wakiilka Midowga Yurub ayaa sheegay in “mar haddii aan qorshahan hayno, waxaa aan taageerro ugu ol’oleyn karnaa AMISOM”.
Midowga Yurub ayaa la sheegay in uu daneynayo in uu sii wado taageerrada uu u fidiyo AMISOM, iyaga oo doonaya in ay ballaariyaan oo ay ku soo daraan xasilinta.